कसले कसरी मनाउँदैछन् 'जनयुद्ध दिवस' ?
कसले कसरी मनाउँदैछन् 'जनयुद्ध दिवस' ?
२०७५ माघ २८ सोमबार १३:३४:००
फागुन १ लाई माओवादी घटकहरुले जनयुद्द दिवस मनाउँदै आएका छन् । तत्कालिन शसस्त्र युद्द सुरु गरेको सम्झनामा माओवादी घटकहरुले यो दिवस मनाउँदै आएका थिए । तत्कालिन अवस्थामा जनयुद्द गरेको मुख्य नेतृत्व माओवादी केन्द्र अहिले अस्तित्वमा छैन । उसले तत्कालिन नेकपा एमालेसँग एकता गरेर नयाँ दल नेकपा बनेको छ । त्यो बाहेक तत्कालिन युुद्द गरेका बाबुराम नयाँ शक्ति पार्टी बनाएर छुट्टै अस्तित्वमा छन् । मोहन बैद्य नेकपा क्रान्तिकारी गठन गरेर आन्दोलनमा छन् । भने विप्लव नेतृत्वको नेकपा पनि अर्धभूमिगत अवस्थामै छ । त्यस्तै भर्खरै माओवादी केन्द्रबाट बाहिरिएका गोपाल किराती पनि माओवादी केन्द्र पुनर्गठन गर्ने अभियानमै छन् । तत्कालिन अवस्थामा युद्द गरेका माओवादी घटक विभिन्न टुक्रामा छ । फागुन १ नजिकँदै जादा यो दिवसलाई कसले कसरी मनाउने चर्चा हुन थालेको छ ।
यसपटकको जनयुद्ध दिवस भने पूर्व एमाले समूहले पनि मनाउने भएको छ। माओवादी केन्द्रसँग एकता गरेर बनेको नेकपाले मुख्यालय धुम्बाराहीमा यस वर्ष जनयुद्ध दिवस मनाउने जनाएको छ । तर नाम भने परिवर्तन गरिने भएको छ ।
नेकपाले जनयुद्ध दिवसलाई शहीद स्मृति दिवसको रुपमा मनाउने तयारी गरेको हो।
यसका लागि पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलले पार्टीका तल्ला कमिटी, भातृ संगठनलाई सर्कुलर जारी गरी दिवस मनाउन निर्देशन दिएका छन्।
तत्कालीन माओवादीका सर्वोच्च कमाण्डर रहेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अहिले नेकपाका दुई अध्यक्ष मध्ये एक हुन्। उनकै पहलमा नेकपाले जनयुद्ध दिवसलाई पार्टी्भित्र मनाउने तयारी गरेको हो।
तत्कालीन एमालेले माओवादीले चलाएको सशस्त्र युद्धलाई ‘जनयुद्ध’को रुपमा अस्वीकार गर्दै आएको थियो। अहिले पनि नेकपाभित्रको एमाले पंक्ति ‘जनयुद्ध’ शब्दमा सहमत नभए पनि मनाउने दिनमा सहमत हुँदै ‘शहीद स्मृति दिवस’को रुपमा मान्न राजी भएको हो। यही नाममा तत्कालीन एमालेले पनि यस दिन देशैभर दिवश मनाउने तयारीमा लागेको हो।
महासचिव पौडेलले पार्टीको केन्द्र, प्रदेश तथा जिल्ला कमिटीहरुका कार्यालयलाई सर्कुलर जारी गर्दै फागुन १ गते सबै पार्टी कार्यालयमा कार्यक्रम गर्न निर्देशन दिएका छन्।
सोही दिन धुम्बाराहीमा श्रद्धाञ्जली कार्यक्रमको आयोजना हुनेछ। कार्यक्रममा पार्टीका दुवै अध्यक्षहरु प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमेत सहभागी हुनेछन्।
यसैबीच जनयुद्ध दिवसको दिन अध्यक्ष प्रचण्ड अर्को कार्यक्रममा समेत सहभागी हुनेछन्। तत्कालीन माओवादी निकटको जनसांस्कृतिक महासंघले आयोजना गरेको सांस्कृतिक कार्यक्रममा प्रचण्ड सहभागी हुने कार्यक्रम रहेको छ।
मार्चपास गर्दै वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी माओवादी
यसैबीच जनयुद्धको नेतृत्व गरेको तत्कालीन माओवादीको एक घटक मोहन वैद्यय ‘किरण’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी)ले देशैभर युवा मार्चपासको गर्ने भएको छ। ‘रेड मार्चपास’को नाममा देशैभर युवा मार्चपासको आयोजना गर्ने क्रान्तिकारी माओवादीले जनाएको छ।
त्यस्तै उपत्यकामा फागुन १ गते शान्ति वाटिकामा कार्यक्रमसमेत आयोजना गरिएको छ।
त्यस्तै माओवादीको अर्को घटक नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भूमिगत रुपमै विभिन्न कार्यक्रम गर्ने जनाएको छ। विप्लव नेतृत्वको नेकपाले राजधानीमा देखिने कार्यक्रमको आयोजना गर्ने छैन।
नयाँ शक्ति पार्टीको पूर्व पश्चिम अभियानमा रहेका नेता डा. बाबुराम भट्टराइले भने यो पटक जनयुद्द दिवस नमनाउने भएका छन् ।